Fahasamihafana eo amin'ny fehin-kibo voajanahary sy ny volo voahosotra | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny fehin-kibo voajanahary sy ny volo voahosotra | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Trano / siansa & natiora / siansa / simia / simia indostrialy / fahasamihafana misy eo amin'ny fehin-kibo voajanahary sy ny volo vita amin'ny volo
Fahasamihafana eo amin'ny fingotra voajanahary sy ny volo vita amin'ny vulkanis
14 Jona 2019 Narotsak'i Madhu
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fingotra voajanahary sy ny volo vita amin'ny volo dia ny fehin-kibo voajanahary dia thermoplastic , fa ny volo vita volo kosa dia thermoset.
Ny fingotra voajanahary no fitaovana azo raisintsika ho tara-pahazavana amin'ny hazo fingotra. Ny latabatra manta dia tsy ampiasaina be loatra satria tsy dia misy faniriana firy. Mba hanatsarana ny toetrany, azontsika atao ny manamboatra volo amin'ny alàlan'ny solifara na fomba hafa mety. Avy eo, antsointsika hoe "fingotra vita amin'ny volo".
2. Inona ilay fingotra voajanahary
3. Inona no atao hoe Vulcanized Rubber
4. Fampitahana mifanila - fehin-kibo voajanahary vs Vulcanized Rubber amin'ny endrika Tabular
Inona no atao hoe fingotra voajanahary?
Ny fingotra voajanahary dia ny faran'ny latsa-kazo misy fangaro polymère. Ny latabatra manta dia miraikitra ary kôlôida milky izay avy amin'ny tsindrona vita amin'ny hodi-kazo. Antsoinay ho toy ny "mitendry" ny fanangonana ny tsiranoka avy amin'ireo fihisin'ny hoditray ireo.
Ny latex vita amin'ny rubber voajanahary dia misy polymer cis-1,4-polyisoprene. Ny lanjan'ny molekiola an'ity polymer ity dia manomboka amin'ny 100,000 ka hatramin'ny 1.000.000 Daltons. Matetika, 5% amin'ny vongan-tany maina amin'ny latina vita amin'ny fingotra dia fitaovana voajanahary sy tsy taovolo hafa; ny akora biolojika dia mety misy proteinina, asidra matavy, resina sns, raha toa ka misy sira kosa ny zavatra tsy biolojika. Na izany aza, misy loharano voajanahary hafa amin'ny fingotra misy trans-1,4-polyisoprene, izay isomeram-pirazanana ny cis-1,4-polyisoprene.
Sary 01: nipaipaika
Araka ny fananan'izy ireo, ny fingotra voajanahary dia elastomer ary fitaovana thermoplastic. Ankoatr'izay, ny fingotra dia mampiseho toetra simika sy ara-batana tokana. Ny sasany amin'ireto fananana ireto dia toy izao:
Ny fitaratry ny kristaly
Mety iharan'ny valan-javamaniry
Marefo amin'ny famakiana ozone
Mivaha amin'ny turpentine sy naphtha
Ny amoniaka dia afaka misoroka ny fehin-kibo tsy hiangona
Manomboka miempo amin'ny 180 ° C
Ankoatr'izay, ny fingotra tsy voatsabo dia ilaina amin'ny simenitra, amin'ny fampiharana insulate, amin'ny tape friction, sns. Satria tsy manana toetra faniry be ny fingotra voajanahary, dia vitsy kokoa ny fampiharana noho ny fingotra vita volo.
Inona no atao hoe Vulcanized Rubber?
Vulcanized rubber dia fitaovana miforona aorian'ny famoahana volo vita amin'ny voanjo voajanahary. Vulcanization dia natao hanatsarana ny toetran'ny fingotra voajanahary; noho izany, dia manana fananana maniry bebe kokoa (ary koa fampiharana maro). Ny vulcanization dia dingan'ny fananganana ny rohy miampita eo anelanelan'ny rojo polymer. Noho izany, ity dingana ity dia manamafy ny fitaovana vita amin'ny fingotra.
Sary 02: Mpiasa mametraka kodiarana amin'ny lasitra alohan'ny fanamasinana
Araka ny fomban-drazana, dia miresaka momba ny fitsaboana ny fingotra voajanahary miaraka amin'ny solifara isika ho toy ny fanamontsanana. Amin'izao fotoana izao dia misy fomba samihafa hanatanterahana izany. Azontsika atao ny milaza fa ny vulcanization dia toy ny fizotran'ny fanasitranana elastomer. Izy io dia satria ny fanasitranana dia manondro ny fanamafisan'ny fitaovana amin'ny alàlan'ny fananganana rohy. Noho izany, ny fizotrany dia manampy amin'ny fampitomboana ny fahamendrehana sy ny faharetana. Amin'ny ankapobeny dia tsy azo ovaina ny fanadiovana volo.
Ireto ny simika ampiasain'ny fomba maro samihafa amin'ny fanadiovana volo:
Rohy mankany amin'ny urethane
Na dia ny fampiasana solifara aza no fomba mahazatra indrindra, dia miadana izy io ary mitaky solifara betsaka. Ankoatr'izay, mila hafanana sy hafanana avo lenta izy io. Ny antony lehibe tokony hodinihintsika mandritra ny fanadiovana volo dia ny fotoana lasa talohan'ny nanombohany (fotoana nahamay), ny taham-pahavitrihana ary ny haben'ny fanadiovana.
Inona ny fahasamihafana misy amin'ny fingotra voajanahary sy ny fingotra vita amin'ny volo?
Ny fingotra voajanahary dia ny tara-by vita amin'ny rubber izay misy fifangaroana polymers, raha ny rubber vita amin'ny volo kosa no fitaovana aorian'ny famoahana volo vita amin'ny voanjo voajanahary. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fingotra voajanahary sy ny volo vita amin'ny volo dia ny toetra mampiavaka azy ireo. Izany hoe; ny fingotra voajanahary dia thermoplastic, fa ny rubber vita amin'ny volo dia thermoset. Ankoatr'izay, ny fingotra voajanahary dia tonga toy ny kôlôidia milky ary vokarin'ny hazo fingotra ho toy ny tara-pahazavana ao anaty hodi-kazo. Vulcanized rubber dia fitaovana mafy hatoka izay misy rohy miiba eo anelanelan'ny rojo polimerika ary vokarina amin'ny alàlan'ny fanodinkodinana. Noho izany, tsy fitoviana iray hafa ihany koa ny vita amin'ny fingotra voajanahary sy ny volo vita volo.
Ity ambany ity ny sary-sary momba ny mahasamihafa ny fingotra voajanahary sy ny volo vita amin'ny volo dia mampiseho fampitahana bebe kokoa.
Famintinana - Fingotra voajanahary vs.
Ny fingotra voajanahary dia fitaovana voajanahary voajanahary raha ny volo vita amin'ny volo vita amin'ny volo no fitaovana mamorona aorian'ny famoahana volo vita amin'ny kofehy voajanahary. Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fingotra voajanahary sy ny volo vita amin'ny volo dia ny fingotra voajanahary dia thermoplastic fa ny volo vita amin'ny volo dia thermoset.
1. “Vola voajanahary.” Wikipedia , Foundation Foundation, 8 Jona 2019, Hita eto .
2. Coran, AY “Fanamorana volo.” Vulcanization - topy topimaso | Lohahevitra momba ny siansa mivantana , misy eto .
1. "Hazo famaohana any Kerala, India" Nosoratan'i M.arunprasad - Asa navoakan'i M.arunprasad (CC BY 2.5) avy amin'ny Wikimedia Commons
2. "VulcanizationMold1941" Nosoratan'i Alfred T. Palmer - azo alaina ao amin'ny Tranombokin'i Etazonia an'ny Prints sy ny sary Photographes (Public Domain) amin'ny alàlan'ny Wikimedia Wikimedia
Fahasamihafana eo amin'ny reaktoran'ny nokleary sy ny baomba nokleary Fahasamihafana eo amin'ny Cloud Point sy Pour Point Fahasamihafana eo amin'ny mpanadio sy ny mpanazava Fahasamihafana eo amin'ny Antrasite sy ny arina Fahasamihafana eo amin'ny biomassa sy ny biofuel
Fahasamihafana eo amin'ny klorida vy II sy klorida vy III
Fahasamihafana eo amin'ny vozon'akanjo manga sy fotsy fotsy
Fahasamihafana eo amin'ny lalàna sy ny lalàna
Fahasamihafana eo amin'ny elefanta lahy sy vavy
Fahasamihafana eo amin'ny Glass sy Crystal